दुई महिनाभित्र सबै विभाग गठन भइसक्नुपर्नेमा २ बर्ष रित्तै ! - ४ भाद्र २०७५, NepalTimes
दुई महिनाभित्र सबै विभाग गठन भइसक्नुपर्नेमा २ बर्ष रित्तै !
कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र सबै विभाग गठन भइसक्नुपर्छ । तर, १४ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति चुनिएको साढे दुई वर्षसम्म पार्टीका ४२ वटै विभाग रिक्त छन् । पार्टीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभाग र समिति निष्क्रिय छन् ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।